Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A January 2011 (7)
Q and A January 2011 (7)
1. တားဆေး ကြာရှည်စားလို့ ရှိရင်
2. မျက်တွင်းကကျပြီးတော့ မဲလာပါတယ်။
3. မြန်မာဆရာဝန်တွေ ရေးတဲ့ Site
4. ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေတဲ့ အစားအသောက်များ
5. ရင်သား ညာဘက်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို နာနေခဲ့ပါတယ်
6. လက်ဆစ်ဟာ နာကျင်ပြီး ရောင်ရမ်းနေခဲ့ပါတယ်
7. မြန်မာပြည်မှာ သုံးတဲ့ ပိုစတီနော်ဆိုတဲ့ ဆေး
1/24/2011 3:10 PM
ကျမ တားဆေးစားလာတာ အခုဆိုရင် တစ်နှစ် ရှိပါပြီ။ တစ်ချို့ က တားဆေး ကြာရှည်စားလို့ ရှိရင် သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်တက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား။ တားဆေး ကြာရှည်စားရင် ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ကလေးယူရင်လည်း ယူရခက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အချိန်ရရင် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
• “Different Methods of Contraception ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၉)” ကို ဖတ်ပါ။
• “Contraceptive pills ကိုယ်ဝန်တားဆေးရဲ့ အကောင်း-အဆိုး” ကို ဖတ်ပါ။
ကျမမှာ အလုပ်ပင်ပန်းရင် သိသိသာသာကို မျက်တွင်းကကျပြီးတော့ မဲလာပါတယ်။ မျက်ကွင်းတစ်ခုလုံးပါ။ တော်ရုံလည်း မပျောက်ဘူး။ ၃-၄ရက်လောက်ကို ကြာတယ်။ လမ်းလျောက်တာ ကြာလာရင်လည်း အရမ်းမောလာပြီးတော့ မျက်တွင်းက ချက်ချင်းကျပြီး မဲလာတယ်။ ကျမတစ်နေ့ အိပ်ချိန် ၈ နာရီ ရှိပါတယ်။ အသက်က ၂၃ ပါ။ အဲလိုဖြစ်တာဟာ ရောဂါတစ်ခုခု ကြောင့်ပါလား။ အဲလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အားဆေးတွေ သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ လိုအပ်ရင် သင့်တော်မယ့်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးကို ညွန်ပြပေးပါ။
ရောဂါမဟုတ်ပါ။ အသက်လဲ ငယ်ရွယ်သေး၊ အိပ်ချိန်ကလဲ မှန်ပါတယ်။ ရာသီမှ-မမှန်။ မောတယ်ဆိုတာ ထပ်သိချင်တယ်။ သူများတွေထက် ပိုမောတတ်သလား။ ပုံမှအခြေအနေမှာ လက်ကောက်ဝတ်က သွေးခုန်တာ တမိနစ် ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ မိန်းကလေးတိုင်း စားရမဲ့ အားဆေးတော့ လိုပါမယ်။ သံဓါတ် နဲ့ ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု သောက်ပါ။ နောက် ဖေါလစ်အက်စစ် နဲ့ သွပ်ဓါတ်လဲ သောက်နိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်။ တွဲပါတဲ့ဆေးလဲ ရှိတာဘဲ။
24 Jan 11, 21:28
တခြားနိုင်ငံမှာ Medicine တက်နေပါတယ်။ စာတွေ လေ့လာဖို့အတွက် မြန်မာဆရာဝန်တွေ ရေးတဲ့ Site သင်ကြားရေးဘက်နွယ်တဲ့ site / lecture notes and material များတင်တဲ့ site များ ရှိရင် သိချင်ပါတယ်။
Lecture လိုရေးတာ မတွေ့ဘူးသေးပါ။ ဆရာဝန်-ဆေးကျောင်းသားတွေကလဲ ကဗျာတွေ၊ ဆိုရှယ်တွေ များနေတာ သတိထားမိတယ်။ Public Health in Myanmar မှာ ဆောင်းပါးသဘော ရေးကြတယ်။
24 Jan 11, 16:19
ကျနော် အတန်းဖော်တစ်ယောက် တီဘီ ဖြစ်နေပါတယ်။ ရောဂါ မကူးလွယ်အောင် ကိုယ်ခံအားကောင်းစေတဲ့ အစားအသောက်များနဲ့ ကိုယ်ခံအားကျစေတဲ့ အစားအသောက်များကို ပြောပေးပါအုံး။
• သလိပ်ထဲမှာ ပိုးမတွေ့ရင် သူများကို မကူးပါ။ “Nutrition အာဟာရ” ကို ဖတ်ပါ။
Jan 24, 2011 at 3:15 PM
ကျွန်မက မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း (့) မြို့မှာ နေပါတယ်ရှင့်။ အသက်ကတော့ (၃၀) အတွင်းရှိပါပြီ။ ရောဂါကတော့ ရင်သား ညာဘက်ပိုင်းမှာ အရမ်းကို နာနေခဲ့ပါတယ်။ လက်နဲ့စမ်းကြည့်တော့လဲ အကျိတ်ကို မတွေ့ရပါဘူး။ ကွန်ပျူတာကို တစ်နေကုန် ထိုင်ပြီး သုံးနေရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ ရာသီမလာခင်မှာ နာတတ်ပြီး ရာသီပြီးလျှင် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အခု တစ်ခါတော့ အရမ်းနာပြီး၊ ရာသီလာတော့ နည်းနည်း သက်သာသွားပါတယ်။ အိမ်ထောင် မရှိပါဘူးရှင့်။ အခုတစ်ခါ နာပြီးတော့ ညာဘက်ပိုင်းအကြောတွေ အရမ်းတက်ပါတယ်။ အလုပ်ကြောင့်လား ရင်သားနာလို့ ဖြစ်တာလား ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ၁ လ ပိုင်းအစမှာ အရမ်းကိုနာကျင်ခဲ့ပြီး ယခု ရာသီလာပြီးတော့ မနာတော့ပါဘူးရှင့်။ ခွဲစိတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။
နောက်တစ်ခုကတော့ ညာဘက်လက်သူကြွယ်အပေါ်ကရေရင် ဒုတိယ အဆစ်မှာ နွေရာသီတုန်းက တံခါးညှပ်ခဲ့ဘူး ပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်း နာကျင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒိတုန်းကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးရှင့်။ ယခု ဆောင်းတွင်းပိုင်းမှာ လက်ဆစ်ဟာ မနက်တိုင်း နာကျင်ပြီး ရောင်ရမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ယာ ထချိန်ဆို ပိုပြီးနာကျင်ပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်းဆို အကောင်း ပကတိ ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ရှင့်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီး ဆေးစစ် ချင်ခဲ့ပေမယ့် ယခုထိ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့သေးပါရှင့်။ သွားလာရေး အလွန်ခက်ခဲလို့ပါရှင့်။
၁။ (က) ရင်သားနာတာက ရောဂါကြီး မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကင်ဆာဆိုရင် နာတာက နောက်သိပ်ကျမှ ဖြစ်တယ်။ ဒီအရွယ်မှာ ကင်ဆာလဲ မဖြစ်နိုင်ပါ။
(ခ) အိမ်ထောင် မကျသေးသူတွေ၊ ဒီအရွယ်တွေမှာဖြစ်တဲ့ ရင်သားအကျိတ်ကို အရင်စဉ်းစားရမယ်။ ဒါပေမဲ့ မနာပါ။ နာရင်လဲ သိပ်ကြီးမှ။ အလုံးကို သေသေခြာခြာ စမ်းလို့ရလိမ့်မယ်။ မိမိဖါသာ ရင်သားစမ်းနည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
(ဂ) အလုံးလဲ မတွေ့၊ နာတာက အဓိကဖြစ်တာမျိုးက မေးတဲ့သူပြောသလို ရာသီနဲ့ဆိုင်ဘို့ များတယ်။ ခွဲစိတ်စရာ မလိုပါ။ နာတဲ့အခါသောက်ဘို့ Pain killers တခုခု၊ ဥပမာ Paracetamol, Ibuprofen, Mefaremic acid, Diclofenic တခုခု သောက်ပါ။ ဆေးသောက်နေချိန်မှာ သက်သာလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်သောက်ပါ။ ဒါမှ မရသေးရင် (ဆောရီး နော်) ကိုယ်ဝန်တားဆေး ၃-၄ လ သောက်ရတယ်။ လူအများ သောက်ကြလေ့ရှိတဲ့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ၊ ၂၈ လုံးပါ ဆေးကပ်ကို ပြောတာပါ။
၂။ လက်သူကြွယ်။ ခိုက်မိပြီး (၁ လ- ၁လခွဲ) နောက်ကျမှ ဓါတ်မှန်ရိုက်တော့ ကျိုးခဲ့ရင်လဲ ဆက်နေတာသာ ပေါ်မယ်။ နာခဲ့ရင်လဲ အမာရွက်သာ မြင်ရလိမ့်မယ်။ စောစောကရေးတဲ့ အနာသက်သာဆေး တခုခုသာ သောက်ပါ။ ဒါမှမရသေးရင် Prednisolone စားဆေးကို စနစ်တကျသောက်ရမယ်။ ဖြစ်တဲ့သူမှာ သွေးတိုးမရှိရင် သောက်နိုင်တယ်။ ပဌမ ၃ ရက်ကို တခါသောက် ၂ လုံး၊ တနေ့ ၄ ကြိမ် သောက်ပါ။ နောက် ၃ ရက်မှာ တခါသောက် ၂ လုံး၊ တနေ့ ၃ ကြိမ် သောက်ပါ။ တတိယ ၃ ရက်မှာ တခါသောက် ၁ လုံး၊ တနေ့ ၄ ကြိမ် သောက်ပါ။ နောက် ၃ ရက်မှာ တခါသောက် ၁ လုံး၊ တနေ့ ၃ ကြိမ် သောက်ပါ။ နောက် ၃ ရက်မှာ တခါသောက် ၁ လုံး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ် သောက်ပါ။ နောက် တနေ့ ၁ လုံး၊ ၃ ရက်သောက်ပါ။ နာတဲ့နေရာကို ဗမာဆေး ပူတာတခုခုလိမ်းပါ။ Dichlofenic လိမ်းဆေးလဲ လိမ်းနိုင်ပါတယ်။
24 Jan 11, 14:12
ချောင်းဆိုးနေတာ နှစ်ပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ တီဘီဖြစ်နိုင်လား။ မီးခိုးတွေရှူမိရင်လဲ ချောင်း ခဏခဏ ဆိုးပါတယ်။ ဘယ်လိုဆေးတွေ သောက်ရမလဲ ဆိုတာကိုပါ ညွှန်ပေးပါ။ ကျွန်တော့်အကိုရဲ့ ကျောမှာ ညှင်းလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ယားနာဆေးတွေ လိမ်းတာ ခုထိ မပျောက်သေးပါဘူး။ gentalance - C ကိုလဲ လိမ်းပါတယ်။
တီဘီ ဟုတ်-မဟုတ် ဆရာဝန်က စမ်းရမယ်၊ ဓါတ်မှန် ရိုက်မယ်၊ သလိပ်စစ်ရမယ်။ ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာ တီဘီ တခုထဲကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာ ရောဂါလက္ခဏာသာဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါရှိတယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကလဲ အမျိုးမျိုး။ လည်ချောင်းယားပြီး ဆိုးတာအတွက်၊ သလိပ်ရှိလို့ ဆိုးတာအတွက်၊ ရင်ကြပ်လို့ ဆိုးတာအတွက်၊ စသဖြင့် ရှိတယ်။ လက္ခဏာသက်သာဆေးသာဖြစ်လို့ ရောဂါဆေးက ပိုအရေးကြီးတယ်။
• ညှင်းအတွက် “Fungus မှိုရောဂါများ” ကို ဖတ်ပါ။
1/25/2011 9:20 PM
မြန်မာပြည်မှာ သုံးတဲ့ ပိုစတီနော်ဆိုတဲ့ ဆေး၂ ပြားပါတဲ့တားဆေးက ဘယ်လို တိုက်ရမှာပါလဲ။ ကိစ္စပြီးမှ ၂လုံး လုံးလား။ မပြီးခင် ၁၊ ပြီးရင် ၁လား။ နောက်ပြီးတော့ ဒီနေ့အတွက် ၁ကဒ် ၂လုံး ပြီးရင် နောက်တရက်မှာလည်း ဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင် နောက်တကဒ်တိုက်ရမှာလား ။ပြီးတော့ အဲ့ဆေးက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
မြန်မာပြည်မှာ ၀ယ်ရတယ်လို့သိရတဲ့ Postinor ဆိုတာက Postinor-2, Postinor Duo နာမယ်တွေနဲ့ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတယ်။ ဆေးတကပ်မှာ ၂ လုံးပါတယ်။ ဒီဆေးမျိုးထဲမှာ 1.5 mg levonorgestrel ပါတယ်။ ဆက်ဆံအပြီး ၃-၅ ရက် အတွင်း သောက်ရမယ်။ Postinor 1, Postinor2 Unidosis နာမယ်နဲ့ဆိုတာက ဆေး ၁ လုံးထဲသာပါတယ်။ ဆေးပါတာကတော့ 1.5 mg of levonorgestrel အတူတူဘဲ။ Postcoital high-dose progestin-only oral contraceptive pills လို့ဆေးစာနဲ့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်ကို တိတိကျကျ လိုက်ဘို့ လိုတယ်။ ဆက်ဆံတဲ့အကြိမ် နည်းသူတွေသာသုံးသင့်တယ်။ ဒီဆေးကို ပုံမှန်သဘော သုံးသူတွေမှာ တနှစ်အတွင်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မှာ ၂၀ % ရှိတယ်။ Yuzpe regimen ကို အဲလိုသုံးရင် တနှစ်မှာ ၄၀% ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရေးပေါ်သာ ကောင်းတာမို့ ဖြစ်တယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်း။ နေမကောင်း ဖြစ်ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်သား တင်းခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း။ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါ။ ဆက်ပြီး ကာကွယ်လိုရင် အရေးပေါ် ဆေးအပြင် တခြားနည်းတွေကိုပါ သုံးဘို့လိုတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 11:28 PM